Ny Ministeran’ny Fampinarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa dia mandray sy mandinika ary mamaly ny fangatahana « habilitation » rehetra izay voarainy avy amin’ireo toeram-pampianarana ambony samihafa amin’ny alalan’ny CNH na ny « Commission Nationale de Habilitation » izay rafitra iray ao aminy.
Koa eto dia manamarika ny tomponandraikitra fa ny « Institut Conficius » ao amin’ny oniversiten’ny Toamasina dia tsy mbola nametraka « dossier de demande d’habilitation » aty amin’ny Ministeran’ny Fampianarna Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa. Manainga ny « Institut Confucius » ao amin’ny Oniversite Toamasina handefa io fangatahana io aty amin’ny ministera ary hanaraka ny lamina efa mipetraka sy ireo fepetra takina momba izany ahafahana mandinika sy mamaly azy.
Marihina fa tsy maintsy manaraka sy mampiatra ny rafitra LMD koa ny formation iray vao mahazo « habilitation ».Ohatra ny « Institut Conficius » any Fianarantsoa izao dia ao amin’ny Faculté des lettres ao amin’ny Oniversiten’ Antananarivo no miahy azy, izany hoe : « Annexe »no ilay any Fianarantsoa ary efa nahazo fankatoavana na « habilités » izy ireo.
Natao zao fanamarihana izao mba hahafahana mampirindra ny asa sy hofandraisana andraikitry ny rehetra amin’ny sehatra samihafa manandrify azy avy.